Oxygen Concentrator ရောင်းသူ/ဝယ်သူများအတွက် သိထားသင့် စစ်ဆေးသင့်တာတွေပါ။ - getO2mm
Oxygen Concentrator ရောင်းသူ/ဝယ်သူများအတွက် သိထားသင့် စစ်ဆေးသင့်တာတွေပါ။
လူနာအတွက် အရမ်းအရေးကြီးလို့ ဝယ်ရမည့်သူတွေ စက်ကို စေတနာနဲ့ပဲ ရောင်းရောင်း အမြတ်ကြောင့်ပဲရောင်းရောင်း ဒီအချိန်မှာ စက်ရဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ် ဒါမျိုးတွေ မသိချင်ဘူးဆိုရင် ဆက်မဖတ်ပါနဲ့။ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ လူနာအတွက်ဆို ကျွန်တော်စာဖတ်ပီ စက်ဝယ်ဖို့ ဒွိဟစိတ်တွေ ဖြစ်မှာ ကြောက်လို့ပါ။
Brand တစ်ခုတည်းပဲ ဖိပီ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး ဈေးကွက်မှာ အဲ Brand က အဝယ်များတာရယ်၊ အသုံးပြုသူတွေသေချာသိအောင် ရေးတာပါ။ အခုအောက်က စာတွေကတော့ ဘယ် Brand ဘာညာတော့ မဟုတ်ပါဘူး Oxygen Concentrator နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တာတွေပါ။
ကိုယ်ဝယ်မည့်စက်ရဲ့ Input Voltage နှင့် Frequency Hzကို ပထမဦးစွာ ကြည့်ပေးရန်သင့်ပါသည်။ 220-230V/ 50-60Hz (သို့) 50Hz မှသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြု၍ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ 220V/ 60Hz ဆို သုံးစွဲရန် အဆင်မပြေပါ။ 220V/ 60Hz တွေကို အရောင်းအဝယ် မလုပ်ကြပါနဲ့တော့
Power Consumption အနေနဲ့ကတော့ 10L/m စက်တွေသည် 500/550/600W အဲလောက်ဝန်းကျင်ရှိကို ရှိရပါမည်။ 600W ထက်ပိုတဲ့ စက်တွေလဲ ရှိပါတယ်၊ အဲလိုစက်မျိုးတွေကျ Compressor အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လေကို ယူတဲ့အခါ အဆင်ပြေစွာ ယူနိုင်ပါတယ်။ 10L ကို 250/300 W လောက် နဲ့သုံးရင် စက်က Heat တက်လာပီ စက်ရပ်သွားတာ ၊Compressor valve တွေကြေမွသွားတာ၊ မြန်မြန်ပျက်သွားတာ ဖြစ်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ Compressor အနေနဲ့ကလဲ Oil Free ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Purity အနေနဲ့ကတော့ စက်အကုန်လုံးက 93 +/- 3% လိုပဲ ရေးကြတာပါပဲ။ Analyzer နဲ့ စစ်မှပဲ ရနိုင်မယ် Purity ရ မရ။
Noise level ကတော့ အရမ်း Sensitive ဖြစ်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ Flow များများနဲ့ Run ရင် အသံကတော့ နည်းနည်းပိုကျယ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တာထက် ဆူညံနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
Flow အနေနဲ့ကတော့ 0/0.5L/m ကနေ Rated Flow အတွင်း အဆင်ပြေစွာ Setting ချပေးနိုင်ရမယ်။
အဓိကအချက်အနေနဲ့ Oxygen Concentrator မှာ အမျိုးအစားခွဲရင်စက်လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး မတူပါဘူး။ စက်တစ်လုံတည်းမှာလဲ အဲဒါ နှစ်မျိုးလုံးမရပါဘူ:။ နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ မသိနိုင်။
Continuous Flow System (လေအဆက်မပြတ်ထွက်ခြင်း)
Pulse dose/ Intermittent Flow/ AI (လေသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်း ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်း)
ဒီ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတဲ့ စက်ထဲမှာ ကိုယ့်ရောင်းမယ့်စက်သည် ဘယ်အမျိုးအစားလဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
Humidifier ပါခြင်း မပါခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကျ ဆရာဝန်တွေက ပိုသိနိုင်မယ်။ ဒီစက်တွေအတွက် Humidifier မပါရမည့် အခြေအနေကို WHO သတ်မှတ်ချက်မှာတော့ အသက်ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေ Nasal prong နဲ့ Low flow rate up to 2LPM, oxygen is delivered in tropical climates byaconcentrator rather thanacylinder, since concentrators provide oxygen at room temperature whereas cylinders deliver cold oxygen. ဒီအခြေအနေတွေကလွဲပီ Humidifier သုံးသင့်တယ်လို့တော့ ရေးထားပါတယ် အဲတော့ Humidifier ပါတဲ့စက်ကို ဝယ်ထားပီ Humidifier မသုံးချင်ပဲ Dry Air ပဲ သုံးချင်လဲ ရပေမယ့် Humidifier မပါတဲ့စက်ကို ဝယ်ပီ Humidified လုပ်ဖို့ကတော့ မလွယ်ပါဘူး။
Pressure ကတော့ • The oxygen concentrator shall be capable of generating at least 55 kPa at all flows, up to the maximum rated. ကျွန်တော်လဲ WHO သတ်မှတ်ချက်ပဲ ပြပေးနိုင်မယ်။ Rate တွေကတော့ စက်တမျိုးနဲ့ တစ်မျိုး မတူကြပါဘူး
Nebulizing Function ပါခြင်း မပါခြင်း ကတော့ ဒီစက်တွေသည် Oxygen အတွက်ပဲ အဓိကထုတ်တဲ့စက်တွေဖြစ်တယ်။ အဲဒါကိုမှ Option အနေနဲ့ Nebulizer Function ထပ်ထည့်ပေးကြတာပါ။ အဲ Function မပါတော့လဲ အပြင်မှာ Nebulizer device တွေ ဝယ်ရင် သောင်းဂဏန်းဆို ဝယ်လို့ရပါပီ။ ကျွန်တော်တို့က Oxygen ကို အဓိကလိုချင်တာပါ Nebulizer ကို လိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ Oxygen ကို အဆင်ပြေပြေ ထုတ်ပေးနိုင်ရင် ကျေနပ်ရမယ့် အနေအထားပါ
စက်တွေမှာ တစ်ခါသုံးPart တွေ လအလိုက် နာရီအလိုက် လဲရမှာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ရောင်းသူက ဝယ်သူကို ပြောပြပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ်က ဒီစက်ကို ရောင်းတော့မယ်ဆိုရင် အဲစက်အကြောင်းတော့ နည်းနည်းပါးပါး လေ့လာသင့်ပါတယ်
Alarm System အနေနဲ့ကတော့ low O2 concentration, No Flow, High/ Low Pressure, Low Battery, Power Supply Failure, High temperature Alarm တွေပါသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Oxygen Concentrator မှာ ပါတဲ့ Option ကတော့ အပြင်ကနေ Cylinder နဲ့ Oxygen ထပ်ပီ supply ပေးလို့ရတဲ့ စက်တွေလဲ ရှိပါတယ်။ ရှားတော့ ရှားတယ်။ Cylinder ထဲက Oxygen ကို စက်ဆီကို Supply ပေးပြီး စက်က ထုတ်တဲ့ Oxygen နဲ့ ပေါင်းပြီးမှ လူနာဆီကို Support ပေးတဲ့ System အတွက် ထည့်ထားတာပါ။
Medical Grade လို့ ပြောနေတိုင်း Medical grade ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ Specifications တွေပြနေလဲ စာရွက်တစ်ရွက်ပါပဲ။ ဘာပဲပြပြ ရောင်းသူပြတာပဲ တွေ့ရမှာပဲ။ စက်ရောက်လာရင်သာ သူပြထားတဲ့ Specification နဲ့ စက် Name Plate နဲ့ တစ်ချက်ချင်းစီသာ တိုက်စစ်ကြပါ။ တာဝန်ယူမှု့ တာဝန်ခံမှု့ပါ ရနိုင်တယ်ဆိုရင် အဲတာဝန်ယူ တာဝန်ခံတဲ့သူဆီသာ ပြေးဝယ်လိုက်ကြပါ။ Medical Equipment Company တွေက ဝယ်ရင် Purity ပါ စစ်ခိုင်းပါ အားမနာပါနဲ့။
မှတ်ချက်- ကျွန်တော်သည် မည်သည့် Company ဝန်ထမ်း၊ မည့်သည့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်၊ မည်သည့်စက်မှရောင်းချနေသူ မဟုတ်ပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသာဖြစ်ပါသည်။
Credit to https://www.facebook.com/soe.lay.79677471
Original Post - https://www.facebook.com/groups/4268646969813059/permalink/4514605948550492